Psalmen 119 HTB - Nnwom 119 AKCB
1Nhyira nka wɔn a wɔn akwan yɛ pɛ,
na wɔnantew sɛnea Awurade mmara kyerɛ.
2Nhyira nka wɔn a wɔkora nʼahyɛde,
na wofi wɔn koma nyinaa mu hwehwɛ no.
3Wɔnyɛ mfomso biara;
na wɔnam nʼakwan so.
4Woayɛ nkyerɛkyerɛ pa ato hɔ
a ɛsɛ sɛ wodi so pɛpɛɛpɛ.
5Ao, sɛ anka mʼakwan besi pi,
ayɛ osetie wɔ wo hyɛ nsɛm ho ɛ!
6Sɛ midwen wo mmaransɛm no nyinaa ho a,
ɛno de, anka mʼanim rengu ase.
7Mede koma a mu tew bɛkamfo wo
bere a meresua wo mmara a ɛteɛ no.
8Medi wo hyɛ nsɛm so;
na nnyaw me korakora.
Awurade Mmara Ho Osetie
9Aberante bɛyɛ dɛn na nʼakwan ho atew?
Ɛsɛ sɛ odi wʼasɛm so.
10Mede me koma nyinaa hwehwɛ wo;
mma me mman mfi wo mmara nsɛm ho.
11Mede wʼasɛm asie me koma mu
sɛnea merenyɛ bɔne ntia wo.
12Awurade, ayeyi nka wo;
kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm.
13Mede mʼano ka mmara
a efi wʼanom nyinaa.
14Mʼani gye sɛ midi wʼahyɛde so,
sɛnea obi ani gye ahonya bebree ho no.
15Midwinnwen wo nkyerɛkyerɛ ho
na mehwehwɛ wʼakwan mu.
16Mʼani gye wo hyɛ nsɛm ho;
na merentoto wʼasɛm ase.
17Yɛ wo somfo yiye;
na matena ase adi wʼasɛm so.
18Bue mʼani na minhu anwonwade a
ɛwɔ wo mmara no mu.
19Meyɛ ɔnanani wɔ asase so;
mfa wo mmaransɛm no nhintaw me.
20Me kra tɔ beraw bere biara,
wo mmara ho anigyina nti.
21Woka ahantanfo anim, wɔn a wɔadome wɔn,
na wɔman fi wo mmaransɛm ho no.
22Yi wɔn animka ne animtiaabu fi me mu,
efisɛ midi wʼahyɛde so.
23Ɛwɔ mu sɛ sodifo hyia di me ho nseku,
nanso wo somfo bedwinnwen wʼahyɛde ho.
24Wʼahyɛde yɛ mʼanigyede
na ɛyɛ me fotufo.
Awurade Mmara Sodi Ho Bɔhyɛ
25Woabrɛ me ase ma meda mfutuma mu;
kyɛe me nkwa so sɛnea wʼasɛm no te.
26Mesesee mʼakwan na wugyee me so;
kyerɛkyerɛ me wʼahyɛde.
27Ma mente nea ɛwɔ wo nkyerɛkyerɛ mu ase;
na mesusuw wʼanwonwade ho.
28Awerɛhow ama me kra atɔ beraw;
hyɛ me den sɛnea wʼasɛm no kyerɛ.
29Yi me fi nnaadaa akwan so;
na fa wo mmara so dom me.
30Mafa nokware kwan no so;
mede me koma abata wo mmara ho.
31Awurade, mikura wo nkyerɛkyerɛ mu dennen,
mma mʼanim ngu ase.
32Mitu mmirika wɔ wo mmaransɛm kwan no so,
efisɛ woama mʼadwene mu adɔ.
33Kyerɛkyerɛ me, Awurade, na minni wo hyɛ nsɛm so,
na medi so akosi awiei.
34Ma me ntease, na medi wo mmara so,
na mede me koma nyinaa bedi so.
35Kyerɛ me wo mmaransɛm kwan no
na hɔ na minya anigye.
36Dan me koma kɔ wʼahyɛde ho
na ɛnyɛ pɛsɛmenkominya so mfaso ho.
37Yi mʼani fi nneɛma hunu so;
na kyɛe me nkwa so sɛnea wʼasɛm te.
38Di bɔ a woahyɛ wo somfo no so,
na wasuro wo.
39Yi animguase a ɛbɔ me hu no fi hɔ,
efisɛ wo mmara yɛ papa.
40Mʼani agyina wo nkyerɛkyerɛ no!
Kyɛe me nkwa so wɔ wo trenee mu.
Awurade Mmara Mu Ahotoso
41Awurade, ma wo dɔ a ɛnsa da no mmra me so,
wo nkwagye no, sɛnea wo bɔhyɛ no te.
42Afei mebua nea oyi me ahi no,
efisɛ mewɔ wʼasɛm mu ahotoso.
43Nyi nokwasɛm no mfi mʼanom,
efisɛ mʼanidaso wɔ wo mmara mu.
44Medi wo mmara so bere biara
akosi daa apem.
45Mede ahofadi bɛnantew,
efisɛ mahwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ.
46Mɛka wʼahyɛde ho asɛm wɔ ahemfo anim
na wɔrengu mʼanim ase,
47efisɛ mʼani gye wo mmaransɛm ho,
na medɔ no.
48Mede nidi ma wo mmaransɛm a medɔ no,
na midwinnwen wo hyɛ nsɛm ho.
49Kae asɛm a woaka akyerɛ wo somfo,
efisɛ woama me anidaso.
50Mʼawerɛkyekye wɔ mʼamanehunu mu ne sɛ:
Wo bɔhyɛ kyɛe me nkwa so.
51Ahantanfo bu me animtiaa bebree,
nanso mennan mfi wo mmara ho.
52Awurade mekae wo tete mmara no,
na minya awerɛkyekye wɔ mu.
53Abufuw hyɛ me ma, esiane amumɔyɛfo
a wɔapo wo mmara nti.
54Wo hyɛ nsɛm yɛ me dwom tiban
wɔ baabiara a mesoɛ.
55Awurade, anadwo mekae wo din,
na medi wo mmara so.
56Eyi ne ade a meyɛ da biara,
midi wo nkyerɛkyerɛ so.
Ahofama Wɔ Awurade Mmara Sodi Mu
57Awurade, wo ne me kyɛfa;
mahyɛ bɔ sɛ medi wo nsɛm so.
58Mede me koma nyinaa ahwehwɛ wo;
hu me mmɔbɔ sɛnea wo bɔhyɛ no te.
59Madwene mʼakwan ho
na madan mʼanammɔntu akyerɛ wʼahyɛde.
60Mɛyɛ ntɛm, merentwentwɛn
sɛ medi wo mmara nsɛm so.
61Ɛwɔ mu, amumɔyɛfo de hama kyekyere me,
nanso me werɛ remfi wo mmara.
62Ɔdasu mu, mesɔre de wʼaseda ma wo,
wo mmara a ɛteɛ nti.
63Meyɛ wɔn a wosuro wo nyinaa adamfo,
wɔn a wodi wo nkyerɛkyerɛ so nyinaa.
64Awurade, wʼadɔe ahyɛ asase so ma;
Awurade Mmara Sodi So Mfaso
65Wo ne wo somfo nni no yiye
sɛnea wʼasɛm te, Awurade.
66Kyerɛkyerɛ me nimdeɛ ne atemmu pa,
efisɛ migye wo mmara nsɛm no di.
67Mefom ɔkwan ansa na mihuu amane,
na mprempren de midi wʼasɛm so.
68Wuye, na nea woyɛ nso ye;
69Ahantanfo de atoro asra me ho de,
nanso mede me koma nyinaa di wo nkyerɛkyerɛ so.
70Wɔn koma yɛ den na wonni ɔtema,
nanso mʼani gye wo mmara ho.
71Eye sɛ mihuu amane
sɛnea mesua wo hyɛ nsɛm.
72Mmara a efi wʼanom no som bo ma me
sen dwetɛ ne sikakɔkɔɔ mpem mpem.
73Wo nsa na ɛbɔɔ me na ɛnwenee me;
ma me ntease a mede besua wo mmara nsɛm.
74Sɛ wɔn a wosuro wo no hu me a, ma wɔn ani nnye,
efisɛ mede mʼanidaso ahyɛ wʼasɛm mu.
75Awurade, minim sɛnea wo mmara te,
na nokwaredi mu na woatwe mʼaso.
76Ma wʼadɔe a ɛnsa da no nkyekye me werɛ
sɛnea bɔ a woahyɛ wo somfo no te no.
77Ma wʼayamhyehye mmra me so, na minnya nkwa,
efisɛ mʼani ka wo mmara ho.
78Ma ahantanfo ani nwu sɛ wɔfom me kwa nti
nanso mesusuw wo nkyerɛkyerɛ ho.
79Ma wɔn a wosuro wo no mmra me nkyɛn,
wɔn a wɔte wo mmara ase no.
80Ma me koma nnya bembu wɔ wo hyɛ nsɛm ho,
na mʼanim angu ase.
81Wo nkwagye ho anigyina ama me kra atɔ piti,
nanso mede mʼanidaso ahyɛ wʼasɛm mu.
82Mahwɛ wo bɔhyɛ anim ama mʼani abu;
meka se, “Da bɛn na wobɛkyekye me werɛ?”
83Ɛwɔ mu sɛ mete sɛ nsa kotoku a ɛsɛn wusiw ano de,
nanso me werɛ mfi wo hyɛ nsɛm no.
84Wo somfo ntwɛn nkosi da bɛn?
Da bɛn na wobɛtwe wɔn a wɔtaa me no aso?
85Ahantanfo atu amoa de asum me afiri,
a ɛne wo mmara bɔ abira.
86Wo mmara nsɛm nyinaa mu wɔ ahotoso;
boa me, efisɛ nnipa taa me kwa.
87Ɛkaa kakraa bi a anka woyii me fii asase so,
nanso minnyaee wo nkyerɛkyerɛ sodi.
88Kyɛe me nkwa so sɛnea wʼadɔe te,
na medi nkyerɛkyerɛ a efi wʼanom no so.
89Awurade, wʼasɛm no wɔ hɔ daa;
egyina hɔ pintinn wɔ ɔsorosoro.
90Wo nokwaredi kɔ so wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu;
wode asase sii hɔ, na etim hɔ.
91Wo mmara wɔ hɔ besi nnɛ,
na nneɛma nyinaa som wo.
92Sɛ mʼani anka wo mmara no ho a,
anka mʼamanehunu akum me.
93Me werɛ remfi wo nkyerɛkyerɛ no,
efisɛ ɛno so na wonam akyɛe me nkwa so.
94Gye me nkwa, na meyɛ wo de;
na mahwehwɛ wo nkyerɛkyerɛ no.
95Amumɔyɛfo retwɛn sɛ wɔbɛsɛe me,
nanso, misusuw wʼahyɛde ho.
96Mahu sɛ pɛyɛ nyinaa wɔ nea ɛkɔpem;
nanso wo mmara nsɛm no nni ɔhye.
Awurade Mmara Ho Dɔ
97Ao, medɔ wo mmara no yiye!
Midwinnwen ho da mu nyinaa.
98Wo mmara nsɛm ma mihu nyansa sen mʼatamfo,
efisɛ ɛwɔ me nkyɛn daa.
99Mewɔ nhumu sen mʼakyerɛkyerɛfo nyinaa,
efisɛ midwinnwen wʼahyɛde ho.
100Mewɔ ntease sen mpanyimfo,
efisɛ midi wo nkyerɛkyerɛ so.
101Memfaa mʼanan nsii ɔkwan bɔne biara so
sɛnea metumi ayɛ osetie ama wʼasɛm.
102Memman mfii wo mmara ho,
efisɛ wʼankasa na woakyerɛkyerɛ me.
103Wo nsɛm yɛ me dɛ,
ɛyɛ dɛ sen ɛwo wɔ mʼanom.
104Minya ntease fi wo nkyerɛkyerɛ mu;
enti mikyi ɔkwan bɔne biara.
Awurade Mmara Yɛ Kanea
105Wʼasɛm yɛ mʼanan ase kanea
ne me kwan so hann.
106Maka ntam ahyɛ mu kena se
medi wo trenee mmara no so.
107Mahu amane bebree;
kyɛe me nkwa so, Awurade, sɛnea wʼasɛm te.
108Awurade, ma wʼani nsɔ mʼanom nkamfo a efi me pɛ mu,
na kyerɛkyerɛ me wo mmara.
109Ɛwɔ mu sɛ daa metoto me nkwa ase de,
110Amumɔyɛfo asum me afiri,
nanso memfom mfii wo nkyerɛkyerɛ ho.
111Wʼahyɛde yɛ mʼagyapade afebɔɔ;
ɛma me koma ani gye.
112Me koma ayɛ krado sɛ ɛbɛhwɛ wo hyɛ nsɛm so
Awurade Mmara Mu Bammɔ
113Mikyi nnipa a wɔn adwene yɛ wɔn ntanta,
na medɔ wo mmara.
114Wone me guankɔbea ne me kyɛm;
mede mʼanidaso ahyɛ wʼasɛm mu.
115Mumfi me so nkɔ, mo nnebɔneyɛfo,
na minni me Nyankopɔn mmara nsɛm so!
116Wowaw me sɛnea wo bɔhyɛ no te, na mɛtena nkwa mu;
mma mʼanidaso nyɛ ɔkwa.
117So me mu, na menya ogye;
na bere biara mɛhwɛ wo hyɛ nsɛm no.
118Wopo wɔn a wɔfom wo hyɛ nsɛm nyinaa,
na wɔn nnaadaa no yɛ ɔkwa.
119Wotow amumɔyɛfo nyinaa gu sɛ afide;
enti medɔ wʼahyɛde.
120Wo ho suro ma me ho popo;
wo mmara abɔ me hu.
Awurade Mmara Ho Setie
121Mayɛ nea ɛteɛ na ɛyɛ pɛ.
Nnyaa me mma wɔn a wɔhyɛ me so!
122Hwɛ ma wo somfo nni yiye;
mma ahantanfo nhyɛ me so.
123Mahwɛ wo nkwagye anim ama mʼani abu,
ɛrehwehwɛ wo bɔhyɛ a ɛteɛ no.
124Wo ne wo somfo nni no sɛnea wʼadɔe te,
na kyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm.
125Meyɛ wo somfo; ma me nhumu
na mate wʼahyɛde ase.
126Awurade, bere aso sɛ woyɛ biribi;
wɔrebu wo mmara so.
127Esiane sɛ medɔ wo mmara nsɛm
sen sikakɔkɔɔ, anaa sikakɔkɔɔ ankasa,
128na midwen sɛ wo nkyerɛkyerɛ nyinaa ye nti,
mikyi ɔkwan bɔne biara.
Pere Sɛ Wubedi Awurade Mmara So
129Wʼahyɛde yɛ nwonwa;
enti midi so.
130Wo nsɛm asete ma hann;
na ɛma ntetekwaa nya ntease.
131Mibue mʼanom na migu ahome,
na mʼani gyina wo mmara nsɛm.
132Dan wʼani hwɛ me na hu me mmɔbɔ
sɛnea woyɛ daa ma wɔn a wɔdɔ wo din no.
133Tutu mʼanammɔn sɛnea wʼasɛm no te;
mma bɔne biara nni me so.
134Gye me fi nnipa nhyɛso mu,
na madi wo nkyerɛkyerɛ so.
135Ma wʼanim nhyerɛn wo somfo so
136Nsuten nisu aguare me,
efisɛ nnipa nni wo mmara so.
Awurade Mmara Yɛ Pɛ
137Ɔtreneeni ne wo, Awurade,
na wo mmara nso yɛ pɛ.
138Ahyɛde a woayɛ no yɛ trenee;
ɛyɛ nea wonya mu ahotoso pa ara.
139Abufuw ahyɛ me ma,
efisɛ mʼatamfo bu wɔn ani gu wo nsɛm so.
140Wɔasɔ wo bɔhyɛ ahorow no ahwɛ pa ara,
na wo somfo dɔ wɔn.
141Ɛwɔ mu sɛ menka hwee na memfra de,
nanso me werɛ mfi wo nkyerɛkyerɛ.
142Wo trenee wɔ hɔ daa,
na wo mmara no yɛ nokware.
143Ɔhaw ne awerɛhow aba me so,
nanso wo mmara nsɛm ma me ahosɛpɛw.
144Wʼahyɛde yɛ nokware daa;
ma me ntease na manya nkwa.
145Awurade, mede me koma nyinaa mefrɛ wo, gye me so,
na medi wo hyɛ nsɛm no so.
146Misu mefrɛ wo, gye me nkwa
na midi wʼahyɛde so.
147Mesɔre anɔpahema, na misu pɛ mmoa;
mede me werɛ ahyɛ wo nsɛm mu.
148Mʼani gu so anadwo nyinaa,
na misusuw wo bɔhyɛ ho.
149Tie me nne sɛnea wʼadɔe no te;
Awurade, kyɛe me nkwa so sɛnea wo mmara te.
150Wɔn a wɔhyehyɛ atirimɔdensɛm no abɛn,
nanso wɔne wo mmara ntam ware.
AKCB : Nnwom 119